Top 3 Siyaabaha fariimaha qoraalka iPhone kaabta
Subax kasta iyo mid kasta oo aan toos sariiro aannu la telefoonada naga soo socota si ay halkaas oo aanu seexan. Mararka aan xataa ma seexan oo aan aayadaha kuwii inaga. Fiiro dhow oo jawi mashquul muujin dadka haysta telefoonada ay u badan tahay in aayadaha. Dhawrid Tani waxa ay muujinaysaa doorka ay farriimo ka ciyaaro nolosheena iyo halkan u baahan in ay boosteejo ah oo wanaagsan farriimaha, kuwaas oo lagu badbaadinayo in loo isticmaalo mustaqbalka.
Messages adeegi door muhiim ah ku siinaya macluumaad. Iyada oo tirada sii kordheysa ee telefoonada gacanta, farriimo ayaa noqotay mid ka mid ah waxyaabaha ugu kalsoonaan karo isgaarsiinta. Tani qeyb ahaan waa sababta oo ah waxay bixiyaan hab u diiwaan ahaan u tixraaci karo mustaqbalka duwan ee isgaadhsiin afka ah.
Si kastaba ha ahaatee, waqti fariimaha u muuqdaan ilaa uuna iyo xusuusta telefoonka lagama maarmaan in falalka dheeraad ah sida takhalusid ama gurmad buuxiyo. Dambe waa ka doorbiday maadaama ay saldhig ahaan wax kaqabashada baahi timaado. Kaqabashada waa mid aad u muhiim ah sidii fariin keeni laga yaabaa in aad magdhaw magdhow ama ka dhigi doonaa inaad la kulmeyso kharash ah. (Eeg sida inuu ka soo kabsado fariimaha tirtiray iPhone .)
Waxaa jira saddex hab oo sare oo loo isticmaali karo in fariimaha qoraalka ah gurmad iPhone. Waxaa ka mid ah:
Kaabta dhex Lugood
Kaabta dhex Wondershare MobileGo .
Backing ilaa farriimaha ee iPhone dhex iCloud
iCloud waa kaydinta daruur iyo adeegga Kombuyuutarada online ka Apple. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ku saxiixi iyo abuuraan xisaab. Ka dib markii in ay socod ku park ee xaddiga badan oo ka mid ah boos lacag la'aan ah siiyay u taageerto kor. Waxaa la iman meel xusuusta free of 5GB oo lagu kordhin karaa iyado wax gadashada ka badan haddii baahidu timaaddo. Ay weheliyaan user interface saaxiibtinimo waxa ay bixisaa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee ay taageerto kor u farriimaha stress badan aan.
Dhibyaraan waa waxa ugu wanaagsan ee ay qabato tan iyo mid dib kartaa fariimaha by click ee telefoonka meel kasta, waqti kasta. Si kastaba ha ahaatee, ma jirto wax wanaagsan in yimaado oo aan bixitaanku iyo iCloud waa laga reebo lahayn sida ay tahay u nugul haakarisku badan oo tan iyo markii ay ka il online ah oo lagu kaydiyo.
Talaabooyinka soo socda waa in la raacaa si si wax ku ool dib ilaa farriimaha ee iCloud:
Tubada on icon goobaha aad iPhone screen guriga
, Hoos ilaa aad ka heshaan iCloud
Hit menu iCloud ah
Riix 'kaydinta iyo dib up'
Daar iCloud dib
Riix dib hadda sida ku cad sawir hoose.
Backing ilaa farriimo iyada oo Lugood
Lugood waa software maamulka warbaahinta ah ee ay soo Apple, si caadi ah oo la xidhiidha content audio iyo video. Raadi ii on Lugood, ka helo music on Lugood, waxaa ka mid ah sadaro aad maqli lahaa hareeraha waddooyinka iyo xaflado muusik. Laakiin waa in dhammaan waxa samayn kara? Lugood waxaa loogu talagalay si ay u qabtaan waxyaabo badan oo hawlaha warbaahinta sida music play, fariimaha warbaahinta iyo waxa ugu muhiimsan ee dhamaan fariimaha dukaanka.
Lugood waxaa loo isticmaali karaa in ay dib u kor fariimaha ka iPhone tan iyo markii ay la beehsa kartaa kombiyuutarka. La mid ah si ay u iCloud waxa uu leeyahay user interface saaxiibtinimo in si fudud loo isticmaali karo in ay dib u farriimaha ee click ah ee labaad ah.
Si aad farriimaha gurmad dhex Lugood, talaabooyinka soo socda waa in la raacaa:
Isticmaalka mid ka mid ah dekadaha la heli karo computer ku xidhi USB in ay telefoonka.
Marka uu ku xiran, u furan Lugood iyo tagaan "file" tab ee Lugood.
Guji "file" ka dooro "Qalabka" sida hoos lagu muujiyey.
Under 'Qalabka' Select gurmad.
Backing ilaa farriimo iyada oo MobileGo Wondershare
Tani waa bombshell iyo ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada. Wondershare MobileGo waa software desktop taageera labada nidaamka android iyo nidaamka iPhone ka hawlgala ah. Waa awoodo gudashada hawlaha multifarious laga bilaabo ciyaaro music, farriimo in desktops diraya, degida iyo dhoofinta ah ee xogta, ciyaaro kulan oo liiska yahay dhamaadka lahayn.
Haddii aad raadinayso barnaamij sare qiimeeyo in ay u adeegaan baahiyaha kala duwan ah, Wondershare MobileGo laga yaabaa in aad u baahan tahay oo dhan. Sidee karin inuu abuuro isagoo gurmad ah farriimaha ii? Way fududahay kaliya raac tallaabooyinkan fudud.
Ku rakib iyo Orod software ah.
Connect aad telefoon si kombiyuutarka isticmaalka cable USB ama network wireless.
Dooro farriimo ku saabsan suuqa kala pop up ka
Dooro folder caga in ay dib u up
Dooro dib iyo in la hubiyo qalab aan la jaro inta ay socoto gurmad ah.
MobileGo waa tababare hal-ku-mid Android in si wax ku ool u saamaxaaya in aad xariif aad casriga aad kombuutarka. Marka software ah la geliyo, waxaa lagu ogaan doonaa oo la aqoonsado wax qalab Android xiran PC ka via cable USB. Waxaa sidaas bixisaa xal aan xuduud lahayn xogta wareejinta iyo dib u dhexeeya telefoonka ah oo computer ah. Muuqaaladan iyo faa'iidooyinka muhiimka ah Wondershare MobileGo ka mid ah:
Kartida aad u dhoofinayso iyo xiriirada si fudud oo ku haboon.
Awoodda si loogu badalo qaabab leheyn in socon marka loo dhoofiyo files warbaahinta ka PC in telefoonka.
Maamulka file aan xuduud lahayn oo ay ka mid wareejinta, qoqobada, bedelayaan, la tirtiro iwm
Si fudud gurmad xiriirada, barnaamijyadooda, farriimaha si aad PC kaliya click ah.
Hadda la jaan qaada labada Android iyo macruufka.
Sida loo dayactir iPhone aan kaabta in Lugood.
Sida loo gurmad SMS labada Android iyo macruufka.
> Resource > macruufka Data Recovery > Top 3 Siyaabaha fariimaha qoraalka iPhone kaabta